Wararka Maanta: Talaado, Dec 15, 2020-Janaraal Xuud " Mudo 15 maalin gudohood ayaan ku dhawaaqi doonaa maamul ka madax banaan Hirshabeelle "
Odayaasha maanta kulanka la qaatay madaxda dhaqdhaqaaqa hubeysan ee uu hoggaaminaayo Janaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa shaagey iney taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa looga soo horjeedo dhismaha labaad ee Hirshabeelle.
Janaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka hadlayay kulanka ayaa si rasmi ah u shaaciyay in 15 maalin gudaheed ay ku sameysanayaan maamul ka madax banaan Hirshabeelle oo lagu magacaabo Hiiraan State.
Afhayeenka dhaqdhaqaaqa Kacdoonka Samata Bixinta Hiiraan ayaa sidoo kale sheegay in kulamo dhexmaray iyaga iyo wasiirka arrimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Xuseen Afrax ay kusoo dhamadeen isfaham waay.
Ugu dambeynta masuuliyiinta dhaqdhaqaaqa Kacdoonka Samata Bixinta Hiiraan ayaa sidoo kale ugu baaqay xubnaha ka tirsan Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Baledweyne iney isaga baxaan.
Hadalkan maanta kasoo baxay Odayaasha dhaqanka iyo madaxda Kacdoonka Hiiraan ayaa imaanaya xili toddobaadkii labad uu ku sugan yahay Baledweyne wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo u yimid xalinta tabashada reer Hiiraan ee la xariirta Hirshabeelle taasoo hadda u muuqaneysa hal bacaad lagu lisay.
12/15/2020 2:43 AM EST